Nkwupụta gọọmentị nke ndị ụgbọ elu ndị Ukraine banyere ọghọm Tehran
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Nkwupụta gọọmentị nke ndị ụgbọ elu ndị Ukraine banyere ọghọm Tehran
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
Taa, na Jenụwarị 08, 2020, a “Ukraine International Airlines”Ụgbọelu mgbe ọ na-arụ ọrụ ụgbọ elu PS752 si Tehran gaa Kyiv furu efu na radars nkeji ole na ole mgbe ịpụpụrụ na ọdụ ụgbọ elu mba Tehran.
Aircraftgbọ elu ahụ pụọ na ọdụ ụgbọ elu mba Tehran na 06: 10hrs. Iran obodo oge.
Dị ka data mbido, ndị njem 167 na ndị ọrụ 9 nọ n'ụgbọ ahụ. Ndị nnọchi anya UIA na-emezi ka ọnụọgụ ndị njem nọ n’ụgbọ ahụ doo anya.
A ga-eziga ndepụta ndị njem na weebụsaịtị nke ụgbọ elu ahụ mgbe nkwenye ikpeazụ nke ọnụnọ ha nọ n'ụgbọelu ahụ ga-eziga.
Linegbọ elu ahụ na-ekwupụta obi iru ala ya nye ezinụlọ nke ndị nwụrụ na mberede ụgbọelu ahụ ma mee ihe niile iji kwado ndị ikwu nke ndị ahụ. Na mmetụta ozugbo, UIA kpebiri ịkwụsị ụgbọ elu ya na Tehran ruo mgbe ọkwa ọzọ.
Dịka na 09: 30hrs, UIA na njikọ chiri anya na ndị ọrụ ụgbọelu, na-eme ihe niile iji chọpụta ihe kpatara ihe mberede ụgbọelu. N'otu aka ahụ, ụgbọ elu ga-akpọtụrụ ndị ikwu nke ndị njem ahụ, na-enye enyemaka niile enwere ike n'ọnọdụ dị ugbu a.
A gbara ụgbọ elu ahụ n'ụgbọ elu Boeing 737-800 NG (ndebanye aha UR-PSR). Ewuru ụgbọ elu ahụ na 2016 wee nyefee ya na ụgbọ elu gị n'aka onye nrụpụta ya. Oge nhazi ikpeazụ emere ụgbọ elu ahụ mere na 06 Jenụwarị, 2020.
Maka ozi banyere ndị njem nọ n'ụgbọ elu PS752, kpọtụrụ Ukraine International Airline site na ekwentị: (0-800-601-527) - ekwentị bụ n'efu maka oku niile n'ime Ukraine ma ọ bụ maka oku mba ụwa (+ 38-044-581-50- 19).
A ga-eme nchịkọta maka ndị nnọchi anya mgbasa ozi.
Ebe: Conferencelọ Nzukọ maka Boryspil International Airport.
Oge: 08 Jenụwarị, 2020 na 10: 00hrs.
Ebe nzuko maka ndi nta akuko - Desk Ozi, Terminal D, nlele nleba anya nke mba ndi ozo.
A ga-eme nyocha na ntinye nke ndị ikike ụgbọelu nke Ukraine, Iran, ndị nnọchi anya ndị na-emepụta Boeing, ụgbọ elu, na Ngalaba Na-ahụ Maka Mberede Ọdụ ụgbọelu nke Ukraine. Linegbọ elu ahụ ga-agwa maka ọganihu nke nyocha ahụ na ihe butere ọdachi ahụ ozugbo achọpụtara ha.